Izindaba - Inhloso ye-transformer
Isiguquli samandla (i-transformer ngamafuphi) iyisisetshenziswa sikagesi esisetshenziselwa ukuguqula i-voltage yamanje oshintshashintshayo.Ngokomgomo wokungeniswa kuka-electromagnetic, ishintsha izinga elithile le-voltage ye-AC iye kwelinye izinga lamandla kagesi we-AC ukuze ihlangabezane nezidingo zemithwalo ehlukene.Ngakho-ke, i-transformer ithatha isikhundla esibaluleke kakhulu ohlelweni lwamandla kanye nesistimu yokunikezwa kwamandla.
I-voltage ephumayo yejeneretha ivamise ukuba ngu-6.3KV, 10.5KV ngenxa yomkhawulo wezinga lokufakwa kwejeneretha, futhi ubukhulu abudluli ku-20KV.Kunzima ukudlulisa ugesi emabangeni amade ngama-voltage aphansi kangaka.
Ngoba lapho amandla athile kagesi edluliswa, lapho i-voltage ephansi, i-current enkulu, kanye namandla kagesi amaningi angase adliwe ekuphikisaneni kolayini wokudlulisela.Ngakho-ke, i-transformer yesinyathelo-up kuphela engasetshenziswa ukukhulisa i-terminal voltage ye-generator kumashumi ezinkulungwane zama-volts kuya kumakhulu ezinkulungwane zama-volts, ukuze kuncishiswe ukudluliswa kwamanje, kunciphise ukulahlekelwa kwamandla kulayini wokudlulisela ngaphandle kokukhuphuka. ingxenye yesiphambano yocingo ukuze kudluliselwe amandla kagesi ebangeni elide.
Ngemuva kokuthi ulayini wokudlulisa udlulisele amashumi ezinkulungwane zama-volts noma amakhulu ezinkulungwane zamandla kagesi aphezulu endaweni yomthwalo, amandla kagesi aphezulu kufanele ehliswe abe amandla kagesi aphansi afanele ukusetshenziswa kwezinto zikagesi ngokusebenzisa isiguquli esisuka phansi. .Ngenxa yalesi sizathu, ohlelweni lokuphakelwa kwamandla kanye nokusetshenziswa kwamandla, i-transformer eyehlayo iyadingeka ukuze kuguqulwe amandla kagesi aphezulu adluliswa ulayini wokudlulisa abe ngama-voltage ahlukahlukene wamazinga ahlukene ukuze ahlangabezane nezidingo ezahlukahlukene eziyinkimbinkimbi.